Zithini iimarike zeUSDC | Ezezimali
Esinye sezindululo esitsha sokwenza ukonga ngeniso kukwenza imveliso ephucukileyo kwaye kwangaxeshanye ingaziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi abanjengeemarike ezaziwa njengeemarike zeUSDC. Ngale ndlela, kufanele ukuba icaciswe ukuba iimarike zemali ze-USD (i-USDC) zisekwe kwimali yedola yaseMelika eqinisekileyo, esebenza njengebhulorho phakathi kweedola kwiakhawunti yebhanki kunye nothethathethwano ngokutshintshiselana Iimpahla ze-crypto.
Thengisa phakathi Izibini ze-BTC / ze-USDC, I-ETH / iUSDC y USDT / USDC banikwe amandla iminyaka embalwa kakhulu. Ngokusebenzisa le nkqubo yotyalo-mali ngokukhethekileyo njengoko inzima kwangaxeshanye ukuba ijolise kubatyali-mali ngabanye nakwiziko ukuze bakwazi ukufaka iidola zaseMelika kwiiakhawunti zebhanki, baguqule iidola zibe ziithokheni zeUSDC kwaye bazibeke kumaqonga ohlukeneyo ezemali ukuze ukwazi ukutshintshiselana ngokubhaliweyo ngeempahla.
Le nkqubo yokujongana nelizwe elihlala linzima lemali ijolise kubatyali zimali abancinci nabaphakathi abanomdla wokuguqula iidola zaseMelika zenze urhwebo neUSDC. Emva bhalisa kwimizuzu embalwa, abathengi banokwenza uphawu lwedola yaseMelika basebenzise olu khetho. Lo msebenzi ubandakanya ukudibanisa iakhawunti yebhanki kunye nokudlulisela imali kwiinkcukacha zebhanki ezinikezwe yinkonzo.
1 Iimarike zaseUSDC: zithini?
2 Isesichengeni sokuhlaselwa
3 Boleka iingqekembe kumaqonga
5 Ukufakwa kweemali ezintsha
6 Ukukhetha amaqonga edijithali
7 Iimali ezikhoyo ziyafumaneka
Iimarike zaseUSDC: zithini?
Nje ukuba umthengi ayiphawule i-USD, iithokheni ze-USDC zinokudluliselwa kumaqonga ezemali edijithali ngexesha elifutshane kakhulu. Izibini zokurhweba ze-USDC zinokuboniswa ngokuchasene ne-BTC, i-ETH kunye ne-USDT, ngenjongo yokubandakanya izibini ezitsha I-USDC kwixa elizayo. Ingasetyenziselwa abathengi abafuna ukurhoxisa i-USDC kwaye bahlawule inani elilinganayo leedola zaseMelika kwiakhawunti yebhanki.
Kwelinye icala, akukho nto ichaphazelekayo kwinto yokuba ixabiso leeasethi ze-crypto linokuba njalo eguquguqukayo kakhulu kwaye ayinakulinganiswa. Ngale ndlela, ayinakulityalwa ukuba ngezi zikhundla zikhethekileyo unokufumana imali eninzi, kodwa ngesizathu esifanayo ungashiya i-euro eninzi endleleni. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ungalahla phantse lonke utyalomali olwenziweyo. Inqaku elingenakulibaleka kuba linokunika ngaphezulu kokungathandwa kwezi zihlandlo.
Kwelinye icala, kufanelekile ukuba ikhankanywe ukuba ezi ntlobo zemisebenzi zibuthathaka ngakumbi ekufumaneni uhlaselo. Ngale ndlela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba amaqonga edijithali aqinisekisile ukuba zonke iibhalansi ze-ETH kunye ne-ETC zinokufeza imisebenzi yazo ngokwahlula kumacala ahlukeneyo. Ngale ndlela, baphuhlise inkqubo enobuchule ehambisa zonke i-ETH kunye ne-ETC kwi- isivumelwano se-smart ezahlula zombini iimali, iqondisa ibhalansi nganye kwidilesi yesipaji eyahlukileyo. Oku kukhusela zombini iibhalansi kwaye ke ngoko kuvumela iakhawunti ukuba ifakwe kwikhredithi zombini.
Enye into ekufuneka uyivavanye yile ibhekisa kwimigaqo yemali mboleko. Ewe, kule ngqondo kufuneka icaciswe ukuba kwabo basebenzisi ababoleke abanye i-ETH yabo, kufuneka bayithathele ingqalelo into yokuba imigaqo mboleko bafuna ukuba ufumane inani elifanayo kunye nohlobo lweengqekembe obolekise ngazo kwiintsuku ezimbalwa kunye nenzala ekuvunyelwene ngayo. Umboleki akakutyali nantoni na engaphantsi koku, kwaye nokuba umboleki akakutyali nto, nokuba kwenzeka ntoni ngexesha lokugcina imali ebolekwe ngombolekayo.
Boleka iingqekembe kumaqonga
Xa uboleka iingqekembe, alithandabuzeki elokuba uyeka ubunini kunye nolawulo lwazo ukuze utshintshise inqaku elinomdla. Ezi ngqekembe zihanjiswa ngqo kumboleki, onokwenza nabo nantoni na abayifunayo: beka iodolo, vula indawo, njl. Ngokusekwe kulo mgaqo, abo banayo ibhalansi eyiyo, abolekwe okanye kungenjalo, banamalungelo kuyo yonke into abanako. Ukuze ukwazi ukuphumelela kunye nabo ngexesha lokufumana.
Kwelinye icala, xa umntu eboleka i-ETH, bahlala besenza loo nto ukuyithengisa kwangoko kwabanye abathengisi, kubandakanya nabathengisi bendawo abangakwaziyo ukuba iingqekembe zivela kumntu ozibolekiweyo. Abathengisi bamabala abathengisayo BTC ye-ETH banokuthenga kwakho ngokungathandabuzekiyo kwaye ngabamkeli abafanelekileyo bemali ye-ETC ehambelana nokubanjwa kwakho kwe-ETH ngexesha lefolokhwe.
Ezi ntlobo zemisebenzi zinzima kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo ayingabo bonke abatyali mali abakwisikhundla sokuvula izikhundla. Ayothusi into yokuba kuninzi okusemngciphekweni kwaye banokuphulukana nayo yonke imali eyinkunzi. Ujongene nale meko, i kufunda lelona yeza lokuthintela iimeko ezingafunekiyo. Ukulungiselela le nto, kuyacetyiswa kakhulu ukuba ukhethe amaqonga edijithali kule klasi yotyalo-mali eneakhawunti yomboniso. Babizwa ngokuba "yiDemo".
Olu didi lweeakhawunti sisixhobo sokufunda kwezi ntshukumo kodwa kufuneka batyale imali yokwenyani. Oko kukuthi, bayenziwa kwimali yokwenyani yokufunda ngokuthe ngcembe olu hlobo lwemisebenzi enzima. Unokubaphuhlisa ixesha elide ufuna kwaye ude ubone ukuba ukulungele ukuthatha umtsi omkhulu kwaye ukhethe imali yokwenyani. Apho unako yenza imisebenzi ibe yinzuzo, kodwa kwangaxeshanye ukushiya ii-euro ezininzi apha endleleni. Ayizizo zonke iiplatifomu zedijithali zezi mpawu ezibonelela ngesixhobo somsebenzi kwaye ke uxanduva lwakho iya kuba kukufumana enye ebandakanya le nkonzo okanye ulungiselelo olongezelelweyo.
Ukufakwa kweemali ezintsha
Ngokubanzi, aba basebenzisi bezemali baneendlela zokuzikhusela ukukhusela kungekuphela nje iimfuno zabo kodwa kunye nezabo basebenzisi ngokwabo. Ngengqiqo yokuba bengazibhengezi kwangaphambili iinjongo zabo zokubandakanya imali ukunqanda Ukuphathwa kwentengiso. Kungenxa yokuba nasiphi na isibhengezo esivela kuwe singakhokelela ekunyukeni kwamaxabiso ngaphambi kokuba iinkozo zemali kula maqonga edijithali afumaneke ukuze athengise, anike abathengisi babucala ithuba elingalunganga.
Njengoko ubona, emva kwayo yonke inkqubo egqibeleleyo engalungelanga bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi. Hayi kangako. Akufanele uyilibale loo nto awujongananga notyalo-mali lwemveli, ezinje ngokuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya. Baqala kwiimodeli ezahlukeneyo kunye nolwakhiwo ukusuka kwindawo yokujonga. Ngaphaya kolunye uthotho lokuqwalaselwa kwezobuchwephesha kunye nakwikona ezisisiseko. Ngaphandle kwento yokuba yinkqubo yotyalo-mali ethe yaphuhla ngokubanzi kule minyaka idlulileyo.
Ukukhetha amaqonga edijithali
Nokuba yeyiphi indlela, kwaye ukuba uza kuvula izikhundla ukusukela ngoku, awuzukukhetha kodwa ukuqaqambisa ukubaluleka kokukhetha iqonga elilungileyo ledijithali. Kungenxa yenyani yokuba uninzi lwabasebenzisi be-Intanethi bebevela kwiinyanga ezidlulileyo zimele ubuqhetseba kwiminqweno yokwenyani yabatyali zimali zentengiso. Okanye yintoni enye efanayo, ukuba banobuqhetseba kwaye banokudala ngaphezulu kwesinye seengxaki zakho ukusukela ngoku. Ngesi sizathu, kuya kufuneka ulumke kakhulu kukhetho lwakho.
Enye yemiba ekufuneka uyithathele ingqalelo kulondolozo kukuba la maqonga edijithali kutyalo mali yamkelwe ngokufanelekileyo yimibutho yolawulo lwamanye amazwe. Ngokuqhelekileyo bavela kwilizwe apho baye baqalisa khona iinkonzo kunye nekomkhulu labo. Kwaye baqinisekisa ngayo yonke imisebenzi yakho yezinye iindlela ezingekho mthethweni ezinokuthi zikwenze ukuba ulahlekelwe yimali kwiiakhawunti zabo okanye kwiidipozithi zabo.
Iimali ezikhoyo ziyafumaneka
Ngeli xesha, abasebenzisi beli klasi leemveliso ezintsha kunye nezintsonkothileyo banokuthenga kwaye bathengise ukuya kuthi ga kwinani eliphezulu kakhulu lokugcina imali. Ngayo yonke into eqinisekileyo ukuba uninzi lwazo alwazi nokubakho kwazo. Akumangalisi ukuba yimakethi ebonakalayo ebonakalayo sebenza kakhulu nalapho iimpahla zedijithali ezintsha zeentlobo ezahlukeneyo zivela rhoqo ngenyanga. Ngale nto uya kuba nakho ukuyenza, oko kukuthi, ukuthenga nokuthengisa nangaliphi na ixesha.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezinye zeemali zedijithali onokuthi usebenze ngazo kula maxesha achanekileyo? Ewe, nikela ingqalelo encinci kuba uluhlu lude kancinci njengoko uza kubona ngezantsi. Oku kubandakanya iBitShares, Burst, CLAMS, Dash, Decred, DigiBytem, ​​Dogecoin, Einsteinium, Ethereum Classic, Ethereum, Ububanzi, iFactom, iFoldinCoin okanye iFlorincoin, phakathi kwezinye zezona zibalulekileyo.
Njengoko uqaphele, ayinguye wonke umntu onokutyekela ekubeni ayamkele imisebenzi yabo kwintengiso yedijithali yesizukulwana esilandelayo. Kuyanqweneleka ukuba wazise ngaphambi kokuba baqulathe imeko engafunekiyo kuqoqosho lwasekhaya njengoko besikulumkisile ngaphambili. Ayothusi into yokuba kuninzi ongaphulukana nakho kwaye kuncinci kakhulu onokukufumana. Ungakulibali ukuze ungathathi ukungonwabi ukususela ngoku ukuya phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Zintoni iimakethi zeUSDC?